သတင်းထူး ( ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သတင်းထူး ( ၂ )
သတင်းထူး ( ၂ )
Posted by thihayarzar on May 31, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်မှ ကျေးရွာ တစ်ရွာ မြင်ကွင်း ( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
ထက်ထက်ဆိုသူ အား ရမ်းဗြဲမြို့တွင် မုဒိမ်းပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရသူ မသီတာထွေးလက်ဝတ် လက်စားများနှင့် အတူ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြာင်း သိရသည်။ ကျန် နှစ်ဦးအား ကျောက်ထရံကျေးရွာမှပင် ယမန်နေ့ ညဉ့်က ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ တရားခံ သုံးဦးစလုံးကို မိပါပြီ။ ကျေးရွာပေါင်း ၁၁ ရွာခန့်က လူတွေ ကျောက်နီမော်ကို ချီတက်လာပြီး ရဲစခန်းကို ၀ိုင်းပြီး တောင်းဆိုကြတယ်။ တရားခံတွေကို ချက်ချင်း ဖေါ်ထုတ်ပြီး ရဲက ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ကျောက်နီမော် ဒေသခံက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
ယမန်နေ့က ကျောက်နီမော် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၁၁ ခန့်က ဒေါသထွက်နေသော ရခိုင် လူအုပ်ကြီးသည် ကျောက်နီမော် ရဲစခန်းအား ၀ိုင်းဝန်းလိုက်ကြပြီး လူသတ် တရားခံများကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီး အရေးယူဖေါ်ထုတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီးသည် ကျောက်နီမော် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းထွန်း နေအိမ်တွင် သင်္ကာမကင်းခံရ၍ တစ်ခြား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူငယ် (၂)ဦးအား စစ်ဆေး မေးမြန်းနေသည်ကို လူသတ် တရားခံများ အဖြစ် တင်မှတ်ကာ အဆိုပါ လူငယ် ၂ ဦးအား အသေသတ်ရန် ၀ိုင်းဝန်း ချီတက်လာသည်ကို ရဲအဖွဲ့က လမ်းမှ တားဆီးခဲ့ရသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
သေဆုံးသွားသူ မသီတာထွေး (၂၆) နှစ်အား ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် သဂြိုလ်မည် ဖြစ်ရာ ပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်အောင် ရပ်မိ ရပ်ဖများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
မသီတာထွေးသည် သူမနေထိုင်ရာ သပြေချောင်ကျေးရွာသို့ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာမှ အပြန်တွင် မေလ ၂၈ ရက် ညနေ ၅ နာရီကျော်ခန့်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူငယ် သုံးဦး မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ မျက်မြင်များ အပြော အရ သူမလည်ပင်းအား လှီးဖြတ်ထားပြီး ရင်ဝကို ဓါးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ထိုးသတ်ကာ အမျိုးသမီး အင်္ဂါစပ်များအားလည်း ဓါးဖြင့် ချေမွထားကြောင်း သိရသည်။
သူ့ စရိတ်နဲ့ သူ သေဒဏ်ပေါ့ကွယ်။တဏှာအမိုက်အမှောင်ကြောင့်လား၊လောဘမီးကြောင့်လားကွယ်ရို.့ 
အဘဆဲလို့ရှိရင် ကျုပ် ( သား ) ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားကြစေလိုဘာဒယ် ( 26 ) ဂိုရေးရဘာလိမ့်မယ်
အဲ့သည် @#!^%&*(^ ကောင်တွေကို လုပ်ခြင်သလိုလုပ်ပြစ်ကြကွာ
အင်တာနက်ပေါ်ကပုံတွေအားကျပြီး တင်မလို့ထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်တစိမ့်စိမ့် ပြန်ကြည့်ပြီး ပီတိဖြာမလို့ များစိတ်ကူးနေတာလားမသိဘူး။ ပုံမှန်စိတ်နဲ့လူတွေတော့ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။ ကုလားများ ဟီးရိုးလုပ်ပြီဆို သူများ ထက်သာအောင်အမြဲလုပ်တယ်။ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ဖြုတ်ဦး ဏှောက်ကောင်တွေ။ သေတာတောင် ရိုးရိုးမသေသင့်ဘူး။
I proud of Rakhine state because they are real Buddhism.
ခွေးလောက်တောင် သောက်ဆင့်မရှိတဲ့ကောင်တွေကို သေဒဏ် ပေးတဲ့ သတင်း မဖတ်ရသေးသရွေ့ မကျေနပ်တော့ဘူး
အဲဒီသုံးကောင်ကို သေဒါဏ်မပေးရင် တရာသူကြီးကို သူများကသေဒါဏ်ပေးလိမ့်မယ်…။
မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူသူတွေ-
မြန်မာတိုင်းရင်းသားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူသူတွေ-
အကြိမ်ဘယ်နှစ်ရာထောင် ရှိပြီလဲတောင် မဆိုနိုင်ဘူး
ဖုံးကြ ဖိ ကြ ကာပေးကြတာ…
ဒီတော့ ကျုပ်တို့လုပ်စရာက ဒါမျိုးတွေ အမှန်တကယ် ဖြစ်/မဖြစ် ဟုတ်/မဟုတ် သေချာအောင်စုံစမ်းလေ့လာ
ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ နောင်ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင် လုပ်သင့်တာတွေကို ငွေ/ အချိန်/ လုပ်အား အကုန်ခံပြီး
သူတို့က ခေတ်အဆက်ဆက် သွေးအေးတယ်နော..
ကျုပ်တို့လဲ သွေးအေးပါ …။ သွေးပူပြီး တပွဲထိုး မခံစားပါနဲ့..။
သွေးအေးပါ…။ သွေးအေးအေးနဲ့ လုပ်စရာကို မြင်အောင်ကြည့်ကြပါ…။
တံကျင်လျှိပြီး လူထုရှေ့ မှာ အေးအေးဆေးဆေးသတ်ပေးပါ။
အလွန်အောက်တန်းကျလို့ အောက်တန်းကျစွာပဲ သေသင့်တယ်။
သေဒါဏ်ကို တရားသူကြီးက မပေးရင် လူထုကပေးပါလိမ့်မယ်။
ယူအက်စ်မှာ.. နေးတစ်ဗ်လို့ခေါ်တဲ့.. အင်ဒီးယန်းတွေအတွက်က.. အထူးကာကွယ်ပေး..အခွင့်အရေးပေးတဲ့ဥပဒေတွေထားတယ်..။
… အမဲလိုက်တာတောင်.. သူများ သမင်၁ကောင်ပစ်ခွင့်ပဲရှိရင်.. အင်ဒီယန်းက.. ၂ကောင်ပစ်လို့ရတာမျိုးပေါ့..။
သူတို့မြေကို.. ဥရောပက.. လူဖြူတွေလာနေတာဆိုတာအမြဲအမှတ်ရစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်..
ကျေးဇူးတော်နေ့လို့.. ဒေသခံတွေကို.. ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုတဲ့နေ့တွေလည်း လုပ်ပေးတယ်..။
အဲဒီလို.. ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ.. အထူးဥပဒေတခုခုလုပ်သင့်တယ်ထင်မိတယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. မက်စ္စဟီကိုနဲ့နယ်ထိစပ်နေတဲ့.. မက်စီကန်တွေအ၀င်များတဲ့ပြည်နယ်.. ဥပမာ..အာရီဇိုးနားမှာ.. မသင်္ကာရင်ရဲကကောက်စစ်လို့ရတဲ့.. အထူးဥပဒေပြဌာန်းထားတယ်..။
တရားမျှတမှုကိုလေးစားမြတ်နိုးတဲ့.. ရခိုင်-မွတ်စလင်ပြည်သူများပါ.. ဒီအရေးအခင်းကို.. ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းပေးကြစေလိုပါကြောင်း..။
( တရားမျှတမှုကိုလေးစားမြတ်နိုးတဲ့.. ရခိုင်-မွတ်စလင်ပြည်သူများပါ.. ဒီအရေးအခင်းကို..
အတိုင်းထက်လွန် ချစ်ခင်မြတ်နိုးနှစ်လိုစုံမက်တွက်ဖက်မြိုသိပ်သိုသပ် ထားထိုက်တဲ့ ဆပ်ဂျက်၇ှင်း :D
ပြဿနာဖြစ်ပုံကလည်း လူ့တိရိ စ္ဆာန်တွေပြောရမလားဘဲ တုံးလှုပ်စရာတောင်ကောင်းလှပါတယ်
( လူမျိုးခြားသုံးဦး၏ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသော ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့၊ ကျောက်နီမော်မှ
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်၏ ဈာပနကို ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ကျောက်နီမော်သုဿန်၌
ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒေသတိုက်နယ်တ၀ှန်းရှိ ဒေသခံအင်အား ၅၀၀၀ ကျော် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြသည့် လူထုတွင် အပျို၊ လူပျို လူငယ်များက အများစုဖြစ်သည် ။ လွမ်းသူပန်းခွေတွင်လည်း
တရားခံ ၃ ဦးအား ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများရှေ.တွင် သတ်ပေး၇န်တောင်းဆိုစာကိုရေးသားထားပါတယ်။
( လွမ်းသူပန်းခွေတွင်လည်း တရားခံ ၃ ဦးအား ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများရှေ.တွင် သတ်ပေး၇န် တောင်းဆိုစာကို ရေးသားထားပါတယ်။ )
ဆိုတာလေးကို တရားဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဘို့ ဘာညာကွိကွ အောက်လေနဲ့နေလိုက်ရင်
လွန်လေပြီးသော အချိန်တွေက အာဏာပိုင်တွေ ဘယ်လိုဥပဒေချိုးဖေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပါ
ပြောလို့သာပြောတာ ကျုပ်နေတဲ့ရွာများ အဲ့လိုကောင်တွေရှိလို့ကတော့ ခွေးမသားတွေ
ဟင်းဟင်းဟင်း ပြောတော့ပါဘူး ဒေါသတွေထွက်လာဘီ
တော်တော်ရက်စက်တာပဲ။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်အညိုးတွေကြောင့် ဒိလောက်ရက်စက်ရလည်းမသိဘူး။ မှတ်တမ်းတင်ခွေလည်းရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ သဘောရိုးမှမဟုတ်ပဲကြိုတင်များစီစဉ်ထားလေရော့သလားမသိဘူး။ဒီလိုလူမျိုးနောက်ထပ်ပေါ်မလာပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်။
မသီတာထွေး ကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ မသီတာထွေးရေ
အမျှ ၊ အမျှ ၊ အမျှ
ဒီလိုအမှုမျိုးတွေ ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ကတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်းနဲ့ပြည်သူ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါက်အပြည့်နဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး ၀ိုင်းဝန်း ပူးပေါင်းကူညီမှု အထူးလိုမယ်ထင်ပါတယ်။
sabae phyulay says:
ဒီလင့်ခ်လေး ကူးတင်ပေးနိုင်ဖို့ အရေး..
အကောင့်သစ်တစ်ခု လုပ်ရတယ် ဆိုပါတော့
၀င်ဖတ်ပြီးသွားပြီ၊နိရဉ္စရာကော eleven media group ကော ဘာကြောင့်များ
ဒီသတင်းကို ဖုံးထားရတာလဲ။ငါစဉ်းစားတယ် မင်းတို့မရှက်ဘူးလား။
မင်းတို့အရမ်းစော်ကားတယ်။windtalker ပြောသလို အကောင့်သစ်ဖွင့်ပြီးမှ ပြောရဲတာတော့
တစ်မျိုးကြီးနော်။ ဘယ်ကောင်တွေ စစော်ကားတာလဲဟ။
ဆင်သေကို ဆိတ်သရေနဲ့ ဖုံးနေလဲ ဒီခေတ်ကြီးမှာ မရတော့ပါ။